कृत्रिम गर्भाधान गर्ने बढ्दै – onlinedarpan:
Posted on October 28, 2018 October 28, 2018 Author onlinedarpanComment(0) 158 Views
काठमाडौं – बाँझोपन र निःसन्तान समस्याका कारण कृत्रिम गर्भाधानतर्फ आकर्षण बढेको छ । विभिन्न कारणले प्राकृतिक गर्भाधान हुन नसक्दा दम्पतीको स्वास्थ्य अनुसन्धान गरी उपचार गर्ने विधि कृत्रिम गर्भाधान (आइभीएफ) हो जसलाई कृत्रिम गर्भाधान गराउने वैज्ञानिक प्रविधि पनि भनिन्छ ।
ढिलो विवाह, ढिलो गर्भकारण र बदलिँदो जीवनशैलीका कारण महिलामा बाँझोपन समस्या बढ्दो छ । बाँझोपन बढेसँगै निःसन्तान केन्द्रमा सेवाग्राहीको घुइँचो बढेको छ ।
बाँझोपन समस्या हटाउन कम गर्न प्रयोग हुने यो प्रविधिमा महिलाको डिम्ब र पुरुषको शुक्रकीट प्रयोगशालामा राखेर करिब ४८ घण्टापछि महिलाको गर्भाशयमा प्रतिस्थापन गरिन्छ ।
सीमित ठाउँको सेवा खर्चिलो र लामो हुने हुँदा सेवाग्राही चिन्तामा हुन्छन् । निःसन्तानका धेरै कारण हुने भए पनि १० देखि १५ प्रतिशत कारण पत्ता नै नलाग्ने थापाथलीस्थित निःसन्तान केन्द्रकी प्रमुख डा. उषा श्रेष्ठ बताउँछिन् । आजको कान्तिपुरको पृष्ठ ५ मा समाचार छापिएको छ ।
थापाथलीस्थित प्रसूति गृहका निर्देशक डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार सीमित जनशक्ति, न्यून उपकरण र साँघुरो ठाउँका कारण क्रृत्रिम गर्भाधान गराउन समस्या हुने गरेको छ ।
Posted on December 25, 2018 December 25, 2018 Author onlinedarpan
Share0TweetGoogle+Pin00sharesकाठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लवले कालिकोटमा भएको आगलागी प्रति दुख प्रकट गरेका छन् । सोमबार कालीकोटको पातलागाउँपालिका १, खाडागाउँमा आगलागी हुँदा ८७ घर पूर्ण रूपले ध्वस्त भएका थिए । आगलागीमा परि सातजना घाइते हुनुका साथै २ सय ८५ जना विस्थापित हुन बाध्य भएको घटनाप्रति बिप्लवले दुःख व्यक्त गरेका छन् । विप्लवले मङ्गलबार एक प्रेसविज्ञप्ति जारि गरी विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
Share11TweetGoogle+Pin011sharesकाठमाडाैं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले लागु औषधको मूल नै सुकाउने गरी अभियान सुरु गर्नुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार गृह मन्त्रालयले राजधानीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा गृहमन्त्री थापाले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने, ‘उपत्यकाको बाहिरी भागमा गाँजाखेती हुँदै आएको सूचना छ । तपाईहरुले यस्ता तस्करहरुको पहिचान गर्नुपर्नेछ । जनता र सरकार सँगै मिलेर मूल नै विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
Share23TweetGoogle+Pin023shares काठमाडौँ । गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न अपराधीलाई तत्काल पक्राउ गरेर कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने भएपनि कतिपय घटनामा भने प्रहरी अनुसन्धानमै जेलिएको छ । घटना भएको वर्षौं भइसक्दा पनि घटनाबारे जानकारी लिन खोज्दा जवाफ आउँछ ‘अनुसन्धान जारी’ छ । दाङको घोराहीस्थित गोर्खा बोर्डिङ स्कुलका दुई शिक्षकको हत्या भएको १३ वर्ष बितिसक्यो। प्रहरी अनुसन्धान थालेको पनि १३ वर्ष नै विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…